Sifundisa indlela yokuthumela umyalezo ongathunyelwanga kwisicelo semiyalezo | Ndisuka mac
IMacOS Sierra isivumela ukuba sinxibelelane nabanye abasebenzisi beAppleUkuba ne-ID yabo iqhagamshelwe ukuthumela nokufumana imiyalezo. Oko kukuthi, sinenkonzo yemiyalezo kunye nezixhobo zeMac kunye neze-iOS. Kwi-Mac yethu, singathumela imiyalezo ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo. Okokuqala, ukusuka kweyakho usetyenziso lomyalezo. Isibini, Ukwabelana kwizicelo ezithile ikhonkco okanye. Kwaye okokugqibela, kwizaziso ezikweli candelo Social. Nangona kunjalo, ukwazi ukuba umyalezo ufikile kwindawo ekuyiwa kuyo, sinokuwujonga kuphela kwisicelo semiyalezo. Sikubonisa indlela.
Ukuqinisekisa oku, kufuneka sijonge kulwazi oluvela emazantsi emiyalezo ethunyelweyo, ngezantsi nje kwebhabhalaza lentetho eblowu. Ubume bunokuthi "bathunyelwe", "bafundwe ngomhla ..." okanye "bangathunyelwa" ngombala obomvu kunye nendawo yesikhuzo esisilumkisa ngempazamo. Abanye abasebenzisi baphinde babhale umyalezo, kodwa akuyomfuneko.
Kufuneka ucofe nje kuphawu lombuzo obomvu kwaye kuvuleke iwindow evulekileyo, kwaye kuboniswe oku: "Umyalezo wakho awuthunyelwanga" kwaye ikunika ithuba lokuba "uzame kwakhona" ukuthumela umyalezo. Ngokubanzi, kube kanye okanye kabini umyalezo ucofiwe, uthunyelwa kwaye ufunde.
Yintoni enokwenzeka ukuba awukwazi ukuthumela umyalezo? Into yokuqala ekufuneka uyijongile yeyakho uqhagamshelo kwi-Intanethi. Ukulayisha iwebhu kufuneka konele ukuqinisekisa ukuba une-intanethi kwaye ke imiyalezo kufuneka isebenze.
Enye ingxaki inokuba inxulumene ne- Iisetingi ze-akhawunti. Kule meko, yiya kukhetho ngaphakathi kwesicelo semiyalezo. Nje ukuba ucofe ngaphakathi kwiakhawunti. Jonga ukuba iMessage ayisebenzi kwaye unebhokisi "yokuvula le akhawunti" ekhangelwe
Okokugqibela impazamo yesithathu, engalindelekanga yile ukusilela kwenkqubo. Yiya kukhangela ukuba ngaba iinkqubo ze-Apple ziyasebenza kwezi zilandelayo unxibelelwano.
Ngayo yonke le nto, iMiyalezo isebenza ngokukodwa kwiimeko ezininzi kwaye namhlanje yenye yeenkqubo ezikhoyo ezikhoyo zokuthumela imiyalezo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Sikufundisa ukuba ungawuthumela njani umyalezo ongathumelwanga kwisicelo semiyalezo